Bam Gacmeed lagu weeraray Maanta laanta Horseed ee Yaqsheed.Faahfaahin – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Qarax loo adeegsaday Bam Gacmeed ayaa caawa lagu weeraray xarunta laanta Horseed ee degmada Yaaqshiid, Magaalada Muqdisho, kaasoo dhaliyey qasaare dhimasho iyo dhaawac leh.
Wararka ayaa sheegaya in Bamka lagu weerarray xarunta Laanta horseed ee degmada Yaaqshiid ay ku dhinteen 5 qof oo midkood uu yahay askari, waxaana ku dhaawacmay laba qof oo kale, iyadoo dadkii weerarka ka danbeeyay ay goobta ka baxsadeen.
Ciidamada Amniga ayaa xiray goobta weerarku ka dhacay, iyadoo goobta ka qaaday dadkii ku dhintay weerarka, waxaana baxsaday kooxihii weerarka geystay.
Weerarkan ayaa ku soo beegmay xili uu maanta xilka la wareegay guddoomiyaha cusub ee degmada Yaaqshiid oo bedelay guddoomiyihii hore ee degmadaas oo eedeymo culus loo jeediyey
UN Security Council asked to investigate blatant human rights violations in Somalia